Ziyini izinzuzo zokushisela kwe-ultrasonic?
Isikhathi Iposi: Nov-13-2020
Ngokuthuthuka okukhiqizwayo kwezimboni, amapulasitiki asetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene yezomnotho wezwe nasempilweni yabantu ngenxa yezinzuzo zabo zesisindo esincane, amandla aphezulu athile, ukumelana nokugqwala nokucutshungulwa okulula. Ukushisela kwe-Ultrasonic kungahlangabezana nezidingo zep ...Funda kabanzi »
Izingxenye ze-Core Ultrasonic zeMask Ukwenza Machine
I-QRsonic ingumkhiqizi oqeqeshiwe osebenza kakhulu ocwaningweni nasekukhiqizeni ama-transducers asebenza ngamandla amakhulu. Imikhiqizo eyinhloko yenkampani ngama-transducers namandla kagesi e-ultrasonic. Phakathi kwabo, ama-transducers we-15k no-20k we-ultrasonic namandla kagesi asetshenziswa kabanzi njenge-key key ...Funda kabanzi »
Ungayikhetha kanjani i-Ultrasonic Transducer?
Njengoba sazi, i-transducer ye-ultrasonic uhlobo lwedivayisi yokuguqula amandla. Umsebenzi wawo ukuguqula amandla kagesi wokufaka abe ngamandla kagesi (i-ultrasound) bese eyidlulisa, bese isebenzisa ingxenye encane yamandla (ngaphansi kuka-10%). Ngakho-ke, ukucatshangelwa okubaluleke kakhulu kukhetho ...Funda kabanzi »